ခင်အောင်အေး Mon Aug 18, 10:35:00 PM GMT+8
နောက်ဆုံးဝါကျ (၀တ္ထုအပိတ်ကို) အချက်အလက်အရ အမှတ်ပေးလိုက်ပါ၏။
၀ါကျ တည်ဆောက်ပုံ ဒီ့ထက် ကောင်းအောင် မြှင့်တင်နိုင်သေးသည်။ အဲ့ဒါကို
လုပ်နိုင်ရင် ဒီပို့စ်ဟာ အိတ်ဆဲလင့်န်ထ်ပဲ...
စွဲငြိခြင်း အလေ့အထကို မကြိုက်သော်လဲ
ဒီပို့စ် ကို ကျနော် တကယ် ကြိုက်ပါသည်။
Ma Tint Tue Aug 19, 09:11:00 AM GMT+8
Nice post Ma Chit , thanks:)
သဒ္ဓါလှိုင်း Tue Aug 19, 12:12:00 PM GMT+8
မြင်တာတွေ့တာများရင် စွဲငြိတတ်တဲ့သဘော ရှိကြတယ်နော်..
မိုးငွေ့........ Wed Aug 20, 12:08:00 PM GMT+8
မနေ့ကတည်းကကြိုးစားဖတ်နေခဲ့ရတဲ့ ပို့စ်ကလေး ခုမှသေချာဖတ်ရတော့တယ်...။ မျက်လုံးထဲမြင်ယောင်မိအောင်ကို ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အရေးသားတွေကိုစွဲငြိသွားပါတယ်...။
စနိုးဘုရငျမ Fri Aug 22, 06:03:00 PM GMT+8
I think that you are now as Khin Hnin Yu thinking way and Nyein Kyaw writing method. It is good.
မောင်ဘကြိုင်(ချဉ်ပေါင်ခြံ) Tue Aug 26, 12:14:00 PM GMT+8
ချော်လဲတဲ့သူမကို စိတ်ကူးထဲမှာ ပြေးထူမိသွားတယ် အစ်မရယ် တော်သေးတယ်ဘေးမှာ ညီမလေးမပါလို့ပေါ့း)
Thazin Lay Nwe Sun Aug 31, 03:18:00 PM GMT+8